Mbatatisi ne bacon, mushwa uye yero cheki Art sens - mazano eimba nebindu
Mbatatisi ne bacon, mushwa uye yero cheki
09.11.2016 Yakatumirwa na: Art Sense
Iyo yekubheka yazvino yekubhekoni, howa uye yero cheki mbatatisi inosanganisa maviri ari nyore maappetizer, achibatanidza mumwe nemumwe, achigadzira iyo yakawanda zvigadzirwa kuti zviwane kubatana kwakabatana. Imwe hafu yakarongedzwa mushwa uye imwe hafu yakarongedzwa mbatatisi mune bacon. Nekudaro, kana dzakagadzirirwa pamwechete, dzinogona kutaridzirwa seyuniti imwe, yakagadzirwa mumatanho maviri. Kuwanda uye zviyero zvinotaurwa pano zvinogona kutariswa zvakanyanya segwara rekugadzira rekuyedza muyedzo wekuyedza, sezvo kuve nyore kwekubheka uye kushomeka kwehukuru hwezvigadzirwa mune zvigadzirwa zvinotendera huwandu hwakasiyana.
8-10 Medium Yakakura Mbatata
10-12 hombe howa
10-12 mitsetse yakatemwa bacon
200y akange achirwara
Bika mbatatisi, uchingwarira kuti urege kuvadzora uye varegedze. Menya howa nekubvisa zvigutsa uye nekuzvirongedza mupoto. Isa bhotela shoma mune imwe neimwe inverated kapu yehowa uye mwaka nemunyu. Rongedza zvimiti zvakaparadzana mupani. Bika muvheni ine mwero kusvika yabikwa kuburikidza, wozobvisa. Kuparadzanisa mabhendi kuti atonhore. Uchishandisa pendi yekuchenesa, gadzira gomba remukati mune imwe mbatatisi, uye isa mugomba rimwe nerimwe zvabikwa howa zvabikwa kuti zvisunge zvakanaka. Rongedza rokwe rebhotela uye cube yemashizi pavari. Mwaka nemunyu uye kuputira mune chidimbu che bacon. Chengetedza neino mazino. Kuparadzaniswa, mune imwe chipanje chiisa yakatemwa bacon uye usase ne grated cheki. Unogona kuvabikira pamwechete kana mumwe neumwe zvichienderana nezvido zvako, uchishandisa pani imwechete (nemupunga) mauri maanga makagadziriswa howa. Izvo zvinodikanwa kungwarira nekurongeka kweiyo yakaputirwa mumabhatoni ebhekoni, cheki kuti ive padivi repamusoro, nekuti kana zvisina kudaro inogona kusvetuka. Isa iyo yakakosha yakatemwa kunze kwematatisi mune pani. Kazhinji, 20 maminetsi ari preheated 200 ° C anokwana ese mbatata uye mushwa.
howa ne bacon, masiponji, zano nembatatisi, mbatatisi ne bacon, mbatatisi nemafuta, mbatatisi ne stuffing, mbatatisi ne stuffing, zvakarongedzwa mushwa, zvakabikwa mbatatisi, howa yokubikira, bota nembatatisi, mapikicha, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Ichowo chechinyakare cheMexico tortilla mundiro (zviyo kana zviyo pastry pasina ...
Maruva ezvinonaka zvinonhuwa bites
Ravioli, ravioli, tortellini, chaplets uye nezvimwe zvinowanzobatanidzwa nemarudzi akasiyana ...
"Marble" bhanana roll
Rakanaka bhururu roll nechidimbu chinonakidza. Zvinodiwa Zvigadzirwa: Zvemawuru uye dhiri ...
Inonakidza bun yeupfu
Iyi ipfungwa yekutanga uye nehunyanzvi yekugadzira chingwa chehoridhe nekukora zvinhu. Kuzadza ...
Iyi nzira inokurumidza, yakapusa uye inonaka sarudzo yezvimedu zvechingwa. Nemukaka uye kirimu, yakarohwa ...